Waaheen Media Group » Hablihii Boko Xaraam soo daysay oo gaadhay caasimadda Nigeria ee Abuja
Browse:Home Videos Hablihii Boko Xaraam soo daysay oo gaadhay caasimadda Nigeria ee Abuja
Hablihii Boko Xaraam soo daysay oo gaadhay caasimadda Nigeria ee Abuja
Published by Waaheen Media on May 7, 2017 | Comments Off on Hablihii Boko Xaraam soo daysay oo gaadhay caasimadda Nigeria ee Abuja
Af-hayeenka madaxweynaha Nigeria, Femi Adesina, ayaa bartiisa Twiterka ku qoray in 82 gabdhood oo kamid ah gabdhihi Boko Haram ay afuubatay 2014 ay haatan gaadheen caasimada Nigeria ee Abuja.
Gabdhahan la soo daayey waxa lagu badeshay xubno ka tirsan kooxda Boko Xaraam oo dawladdu haysay.
Waa markii labaad ee xukuumada Nigeria ay ku guuleysato soo furashada qaar ka mid ah gabdhihii laga af-duubtay Chibok.
21 ka mid ah gabadhahaa laga af-duubtay Chibok ayaa lasoo daayay bishii Octobar ee sanadkii hore.
Wararka la xidhiidha sii deynta 82 kan gabdhood ayaa inta badan dadka Nigeria aad usoo dhaweeyeen, iyada oo talabaadana ay amaantay kooxda u ololaysa soo daynta gabadha Chibok ee la baxday “noo soo celiya gabdhahayagii”.
Warbixin ay soo saareen koooxdu ayaa lagu sheegay in ay sugayaan shaacinta magacyad arasmiga ah ee 82 gabdhood si loo hubiyo in ay yihiin magacyadii hore loo diinwaan geliyey ee ahaa gabdhaha af-duubteen ee ay hore u shaacisay gudiga madaxweynahu u saaray arinta gabdhihii laga af-duubtay Chibok.
Dhinka kale, hay’adda laan qeyrta cas ayaa sii baahisay sawirada qaar k mid ah 82 gabdhood ee la soo daayey.